Home » Drama, Essays.. » မှန်တာပြော ဆဲစေပါ
မြန်မာတွေက.. အဲဒီနာမယ်ခေါ်တာတွေမှာ တော်တော်အားနည်းတယ်..။
မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်.. မြန်မာပြည်ပြန်သောအခါ..မြန်မာတွေကြားထဲမှာ.. မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပြောရမှာ အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ..။
မြန်ရိကန် အုအုရေ တားရို့က မြမာဂျဂျားပိုတောင် နားမရယ်ရော့ဘူး ဂျ
ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ဒို့မြန်မာ.. အဲ..ဗမာ.. ဒါလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး..
ဘင်္ဂါလီခေါ်လည်း မကြိုက် …
မြန်မာလဲမဟုတ် ဗမာလဲမဟုတ်ဆိုတော့ ဟိုလို ပုဂံအနွယ်တွေလို့ခေါ် အဲ့ အာ့ဆိုလဲ တကောင်းအဘိရာဇာဆိုပြီ ကန့်ကွယ်မှာစိုးရသေး။ ဒါဆိုလဲ တကောင်းအနွယ်လို့ခေါ် ဟုတ်သေးပါဘူး အာ့ဆိုလဲ မြန်မာအစ ပျူကဆိုပြီး ပြောမှာစိုး။
တကယ်ပြောရင် အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ၊ ဘင်ဂါလီ ကိစ္စ ကောင်းကောင်းကို သဘောမပေါက်သေးဘူး။ ဖတ်လေ ဖတ်လေ ခေါင်းချာချာလည် မူးလေပဲ
အမေရိကနေ မြန်မာ – အမေရိကန်တယောက်.. မြန်မာပြည်ပြန်သောအခါ..မြန်မာတွေကြားထဲမှာ.. မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာစကားကို မြန်မာလိုပြောရမှာ အခက်အခဲရှိနေလို့ပါ..။
အမှန်ကတော့… အမှန်အတိုင်းပြောရရင်… အမှန်ဆိုတော့….
ခိုးဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ . . . အဲ . . . အဲဒါ ဘင်္ဂလီနဲ့ မတူဘူးလား . . . မသိတော့ဘူး . . . သူတို့က ထမင်းရှင်အဖေများလို့ ခေါ်ချင်နေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး
ကျော်ပြောဘူးညော် အဲ့ဂျဂါးတွေ ကျော်ပြောဘူး
အခြေအနေ သိပ်မကောင်းဘူး၊ မာမွတ်တို့ တိုက်စစ် ပိုဆင်လာမည့် အနေအထား ရှိတယ်၊ တနေ့က ယူအန်မှာထင်တ် အဲဒိကိတ်စ စစ်လျှာဇဝတ်မှုထိ မြောက်နိုင်ကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်တယ်။ ယူအက်စ်၊ အနောက် အုပ်စုနဲ့ မွတ်ကဗာ အိုအိုင်စီတို့ လူကြီးခြင်းသဘောတူညီချက် gentleman agreement ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီအရေး တချက်ပါပုံရတယ်။ ဒါကြောင့် အီးယူ၊ ယူအက်စ် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမှာ မြန်တြံ့ကို ဘကုန်းအရေး အမြဲဖိအားပေးနေတယ်။ မြန်တြံ့နိုင်ငံဆိုတာ အာရပ်ကဗာနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ထိုးကျွေးစရာကောင်းတဲ့ ကစားကွက်တခုပဲ။ အိုအိုင်စီယာကွတ် တို့ဖက်ကြတော့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိစ်စ ဖြစ်နေတော့ မရမက ထည့်မှာပဲ၊ ရောက်လဲရောက်နေပြီဟာ… ဆက်ထိုးဖို့ပဲကျန်တယ်။
လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေအတိုင်းအတိအကျလုပ်၊ အနီရပြီးသားလူတွေကိုပါ တစ်ကယ့်ဥပဒေနဲ့ညီလာစစ် (ဒါက မန်းလေးက ပေါက်ဖေါ်တွေပါပါတယ်)။ ပြည်သူတွေကလဲ ရန်လိုစိတ်ထက် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ သွေးအေးအေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀င်ရောက်မှုကိုကန့်ကွက်။ ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့။
ဥပဒေနဲ့မညီပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါ ပြန်စစ်စေချင်တာပဲ။ ဟိုနေ့ကတောင် ဖဘမှာ ကုလားမကြီး ၂၀၁၅ထုပ်ပေးရက်စွဲနဲ့ အနီကိုင်ထားတဲ့ပုံတွေ့လိုက်သေး။ ဒါမျိုးက မန်းလေးက တရုတ်တွေမှာလဲရှိတယ်။ ဗမာစကားမတတ် မြန်မာဆိုတာဘာမှန်းမသိပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတွေ့နေရတာ စိတ်တောင်နာတယ်
ဆဲ တတ် ၀ူးး